Qeerroon Bilisummaa Oromoo ugguraa daandii; Okkara Yuunvarsiitii Jijjigaatti – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQeerroon Bilisummaa Oromoo ugguraa daandii; Okkara Yuunvarsiitii Jijjigaatti
Yuunvarsiitii Jijjigaatti walitti bu’insa uumameen barattoonni Oromoo rakkoo keessa jiraachuun dhaga’ame.
Guyyaa kaleessaa mooraa Yuunvarsiitii Jigjigaa keessatti walitti bu’insi barattoota gidduutti uumame sababeeffachuun, qaamoleen nageenyaa haalicha tasgabbeessuuf mooraa seenanis hanga yoonaatti tasgabbiin akka hin bu’iin jiru, Barattoonni Oromoo OMN dubbise himaniiru.
Torbaan tokko dura barattootni Oromoo mooraa Yuunvarsiitichaa jiran biiroo bulchiinsa Pireezidaantii mooraa fuuldurratti hiriira ba’uum akkasumas ammoo nyaata lagachuun, ‘sababa Oromummaa keenyaa dhiibbaan nurra qaqqabaa jiru haa dhaabbatu’ jechuun gaafachuu isaanii OMN gabaasuun ni yaadatama.
Barattuun mooraa Yuunvarsiitii Jigjigaa OMN dubbise akka jechuttitti, gaaffii barattoonni Oromoo kanaan dura gaafataa turan ilaalchisuun guyyoota muraasa dura bulchiinsi Yuunvarsiitichaafi barattoonni mari’achuun wal hubannoorra ga’amuun hunduu barnootatti deebi’anii turan.
Haa ta’u malee guyyoota lama dura barattoonni Amaaraa mormii kaasuun, “barattoota Oromoo waliin kutaa teenyee hin barannu jechuun hiriira ba’an” jetti.
Hiriira mormii barattoota Amaaraa faana dha’uun, barattoota Oromoo irratti haleellaan jalqabuu kan himtu barattuun OMN dubbise kun, guyyaa kaleessa barattootni jeequmsi jiraachuu utuu quba hin qabaatin gara kaaffee deemaa turanirratti haleellaa qaqqabeen, miidhaan qaamaa cimaafi salphaan ga’eera jechuun dubbatti.
Ergasii as lolli kun lola sabummaatti jijjiiramuun barattoonni Oromoo fi saboonni biroo waliin ta’uun, haleellaa kana qolachaa akka turan himuum, lolichi hammaataa jiraachuusaa dubbattee yeroo ammaa kana Poolisii humna addaa Somaaleefi Federaalli mooraa seenuu himu.
Erga qaamoleen Nageenyaa mooraa seenanii as, barattoota Amaaraafi saboota kan biroo qofa qofaatti baafamnee jirra kan jettu maddi keenya kun, qaamolee ijaaramaniin deggeramuun lola Oromummaatu nurratti baname jechuun, barattoota miidhamanillee wallaansisuuf sodaa qabaachuu OMN odeeffateera.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni Oromoo waliin ta’uun aggaammii kana qolachaa jiraachuu kan himan barattoonni moorichaa, barattoonni saboota kan biroo keessaa dhufanis, ijoollee Oromoo waliin ta’uun humna kana dura dhaabbataa jiraachuufi haalli moorichaa tasgabbaa’ee barnoota manaa ba’aniif akka itti fufaniif hojjechaa jiraachuu himu.
Odeeffannoo OMN hanaga ammaatti argateen, barattoota Oromoo guyyaa kaleessaa miidhaan irra ga’e, gariin mana yaalaa geeffamuufi gariin ammoo doormiitti barattootaan yaalamaa jiru.